'IBANGA LESIBHOZO' LILINGANISIWE R NGENXA YOKUBA I-MPAA AYINAMSEBENZI - BO BURNHAM
Umichael B Jordan
IBakala likaBurn Burnham leBanga leSibhozo lilinganisiwe R kuba i-MPAA iyakhathala ngakumbi ngamagama angcolileyo kunobundlobongela obukwiskrini
Ifilimu entsha kaBo Burnham Ibanga lesibhozo , eyaqala ukuboniswa eSundance ngoJanuwari, ilandela uKayla, intombazana eneminyaka eli-13 ubudala esokola ukufumana indawo yakhe kwiveki yokugqibela yebanga lesibhozo. Ngelixa umboniso bhanyabhanya ufumene ukwaneliseka okubalaseleyo njengebali lendalo kunye nelibalulekileyo lokuza kwamabali obudala, abona bafundi bebanga lesibhozo abayi kuba nakho ukuwubona, ngaphandle kokuba umzali okanye umgcini abazise. Ifilimu, ebonisa ukusetyenziswa kwegama lesihlanu, inikwe ngokuzenzekelayo ukulinganiswa kwe-R.
I-MPAA, amandla ane-shady kwaye ayimfihlakalo Asemva kokulinganiswa kwe-movie, anemithetho enzima kwaye ekhawulezayo kwindawo xa kuziwa kwigama le-F. Iifilimu ze-PG-13 zikhawulelwe kumdlalo omnye wefilimu. NgokweCandelo III, C, 3 yeMigaqo yokulinganisa:
Ukusetyenziswa komfanekiso oshukumayo omnye wamagama aqatha asusela kwezesondo, nangona ekhupha nje kuphela, ekuqaleni kufuna ukuba nomsindo nge-PG-13. Ngaphezu kwesinye ukukhupha okunje kufuna ukulinganiswa kwe-R, njengoko kufuneka elinye lala magama asetyenziswe kwimeko yesondo. Ibhodi yokureyitha nangona kunjalo inokulinganisa umfanekiso oshukumayo u-PG-13 ukuba, ngokusekwe kwivoti ekhethekileyo sisininzi sesibini kwisithathu, iiRaters zivakalelwa kukuba uninzi lwabazali baseMelika bangakholelwa ukuba umlinganiso we-PG-13 ulungile ngenxa yomxholo okanye indlela asetyenziswa kuwo la magama okanye kungenxa yokuba ukusetyenziswa kwamagama kumfanekiso oshukumayo kuyinto engaziwayo.
Ukongeza kwii-fucks, ifilimu ikwabonisa iincoko ezimalunga nezesondo, kubandakanya umlinganiswa ophambili ebukele ividiyo ye-Youtube ngendlela yokunika umsebenzi wokubetha, ngaphambi kokuba ukhutshwe kwaye uwucime. I-MPAA ibhale oku njengezinto ezithile zesondo. Ngaphandle koku, amaqela afana nababukeli abangajonganga nzuzo kwiMedia Sense Media basacebisa abazali ukuba babone le filimu nabantwana babo, besithi, Kuninzi kakhulu apha kubazali nakwishumi elivisayo ukuba bayikhuphe, kwindlela yokuziphatha kweentombazana ezinesidima kunye nescreen esininzi / esingalunganga sebenzisa ukubaluleka kokukhathalela ulutsha oludala (ngakumbi amantombazana) kwaye uthi 'hayi' kwinkqubela phambili yesondo engafunekiyo.
Impikiswano ejikeleze Ibanga lesibhozo Ukulinganiswa yinto yakudala kwaye iyakhathaza, njengoko i-MPAA ibinembali ende yokuqhekeza ulwimi, ubunqunu kunye nomxholo wesondo, ngelixa inika indlela eyandayo kwiifilimu ngobundlobongela kunye nemifanekiso ephazamisayo. Iifilimu ezinje UKumnyama Knight kwaye IQela lokuzibulala zikalwe i-PG-13. Iringi , Umboniso bhanyabhanya owoyikisayo ukuphuma kwam njengomntu omdala okhulileyo weesile, ulinganiswe nge-PG-13.
cgp grey isixeko saselondon
Wonke umntu ukhumbula ukwenzakala okuza kwiminyaka yobudala eyayiyifilimu yokuqala ababebancinci kakhulu ukuba babone. Mhlawumbi ubonile It Kumabonwakude kwaye wayephupha kakubi malunga nePennywise. Mhlawumbi umntakwenu omdala ukwenze wabukela NgoLwesihlanu umhla we-13 ngaphambi kokuba uyilungele. Umama uphantse kwi-70, kwaye usakhumbula ebona iVincent Price Bhabha kwaye ukhathazekile iiveki emva koko. Kodwa ngaba uyalikhumbula ixesha lokuqala lokuva i-fuck kwifilimu? Ngokuqinisekileyo akunjalo, kuba akukho mntwana wesikolo ungakhange ayive kubazali, kubahlobo, okanye kwiipaseji esikolweni.
I-MPAA ngumsebenzi omangalisayo kunye nowokufihlakeleyo onobungakanani obothusayo beshishini lefilimu. Banembali yokuphatha izinto ezingamampunge kunye neendaba ezimdaka ngokuqatha kunezo zichanekileyo. Ngolwazi oluthe kratya malunga nendlela esebenza ngayo, ndincoma uxwebhu lukaKirby Dick luka-2006 Le Vidiyo ayikabalwa .
(nge IndieWire , umfanekiso: A24)
Unyulo Lwaphakathi Enyakeni Lwama-2022
iinyani eziyinyani malunga netarsier
iintsomi zangomso ibarack obama
I-westworld isizini 2 yevidiyo eyonakalisayo
iziqhulo ezimdaka eromeo nakwijuliet
Imephu yokuhlangana yomhlaba ophakathi
Intsebezo yentliziyo seiji